Ilaha Waxbarashada Guriga ee Coronavirus (COVID- 19) | Baaraha Boston
Ilaha Waxbarashada Guriga ee Coronavirus (COVID-19)
Gudoomiyaha Gobalka Massachusetts ayaa amray dhammaan dugsiyada dawlada iyo kuwa gaarka loo leeyahay in ay sii xirnaadaan inta hartay sanad dugsiyeedka 2019-2020 si loo yareeyo faafida COVID-19, oo ah cudur ka dhasha fayraska cusub ee korona. Waxaan diyaarinaynaa adeegyo lagu sameeyo waxbarashada guriga oon siinayno qoysaska si la idiinka taageero adinka iyo ilmihiina waxbarashada inta lagu jiro waqtigaan. Boggaan si joogto ah ayaa wax loga badelayaa.
Bogga waxaa markii u danbaysay wax laga badalay 12:00 PM bishii Maarso 8, 2020.
Ka fiiri dhammaan ilaha xogta ee aaladeedaCoronavirus (COVID-19) ee ilaha xogta qoysaska.
Helitaanka Interneetka Bilaashka ah ama Raqiiska ah
Kumbuyuutarada Bilaashka ah ama Raqiiska ah
Ilaha IEP da Waxbarashada Gaarka ah
Ilaha Ardayda Barata Af Ingiriiska (ELL)
Waaxda Waxbarashada Dugsiga Hoose/Dhexe iyo Sare (DESE)
Xarunta Waxbarashada Oonleenka ah ee WGBH
Maktabada Dadwaynaha ee Boston Public (BPL)
Barnaamijka Dugsiga Kadib ee Boston iyo adeegyo kale
Webseetyada Waxbarashada Oonleenka ah ee BILAASH ka ah
Hadaad ubaahantahay marin aqal intarnetka:
Magaalada Boston waxay aruurisay dhowr ikhtiyaar oo lacag la’aan ah ama qiime jaban ah oo ay ku heli karaan dhammaan deganayaasha Boston halkan: Taageerooyinka Xiriirinta Internetka Inta lagu Jiro gurmadka COVID-19 .
Tech Goes Home ayaa isku dartay liiskal ilaha kaladuwan ee interneetka qiimaha jaban ama bilaash ah iyo helitaanka tignooloojiyada.
EveryoneOn ayaa bixinaysa aalada baaritaanka oonleenka ah si lagaaga caawiyo inaad hesho adeegga interneetka oo qiimo jaban iyo kumbuyuutaro aad ka hesho aagaaga. Gali ciwaanka boostada gurigaaga si aad u biloowdo. Aaalada wax lagu baaroayaad luuqada Isbaanishka uga helaysaa halkaan.
Hadaad kombuyuutar u baahan tahay:
Dugsiyada Dadweynaha Boston waxay abaabulayaan u qaybinta kumbuyuutarrada kombuyuutarrada gacanta lagu qaadan karo ee loo yaqaan 'Chromebook laptop' ee ardayda BPS ee aan ku heli karin kombiyuutar joogto ah guriga.
U adeegso foomkan si aad u codsato qoyskaaga Chromebook-ka Chromebook.
Booqo webseetkaan si aad u hesho xog dheeraad ah oo ku saabsan sida aad u diyaarsanayso aaladaada Chromebook.
Haddii cunugaagu dhigto dugsi aan qayb ka ahayn dugsiyada BPS, fadlan toos ula xariir dugsigaaga.
PCs for Peoplewaa Urur khayri ah oo baxsha kumbuyuutaro qiimo jaban iyo interneet raqiis ah ee shaqsiyaadka iyo khayriyaadka u qalma. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhri halkaan.
EveryoneOn ayaa bixinaysa aalada baaritaanka oonleenka ah si lagaaga caawiyo inaad hesho adeegga interneetka oo qiimo jaban iyo kumbuyuutaro aad ka hesho aagaaga. Gali ciwaanka boostada gurigaaga si aad u biloowdo. Aaalada wax lagu baaro ayaad sidoo kale luuqada Isbaanishka uga helaysaa halkaan.
Haddii cunugaagu uu leeyahay qorshaha IEP ama baahiyo kale oo dhanka waxbarashada gaarka ah:
Waaxda Massachusetts ee Dugsiga Hoose iyo Sare (DESE) waxay soo aruurisay sanduuqa Aaladda Kheyraadka Qoyska looguna talagalay qoysaska haysta carruurta qaba baahida waxbarashada gaarka ah. Khayraadkaan waxaa looga heli karaa asagoo ku qoran 17 luuqadood halkaan.
Boston Public Schools (BPS) waxay u diyaarshaan bogga xogta oo loogu talagalay baahiyaha waxbarashada gaarka ah halkaan.
Golaha Massachusetts ee Carruurta Baahiyaha Gaarka ah Qaba (MCEC) ayaa abuuray bogga ilaha xogta ee furan oo loogu talagalay macalimiinta reer Massachusetts si ay isku dhaafsadaan ilaha waxbarashada. Macalimiinta waxbarashada guud iyo kuwa waxbarashada gaarka ah ayaa lagu boorinayaa inay xogta isku dhaafsadaan aaladaan oonleenka ah. Si loo fufudeeyo isticmaalkeeda, MCEC waxay abuurtay galal kali-kali ah oo lagu saleeyay heerka fasalka, laga bilaabo dugsiga barbaarinta ilaa inta laga gaaraayo dugsiga sare.
Massachusetts Families Organizing for Change (MAFOC, Ururka Isbadal Doonka ee Qoysaska Massachusetts) ayaa diyaarshay MatchUs, oo ah adeeg bulshadu samayso oo loo sameeyay macalinka/adeeg bixiyaha la xariira iyo jawaabta qoyska si loo taageero ardaydeena (iyo qoysaskooda!) naafada ah/IEP-yada/baahiyaha taageerada qaba inta lagu jiro waqtigaan adag ee bulshadu kala fogaanayso. Haddii aad u baahan tahay taageerada IEP ga ee guriga, fadlan buuxi foomkaan oonleenka ah (oo lagu heli karo Ingiriis iyo Isbaanish) si laguugu xiro qof ka socda MAFOC.
Understood.org waxaa ku jira ilo muhiim ah oo kala duwan looguna talagalay qoysaska.
Xarunta Waalidiinta ee Oklahomaayaa diyaarisay tusmo hal bogg ah ee Tilmamaha Waalidka ee Kullanada IEP da Oonleenka ah (fayl PDF ah oo ku qoran kaliya Ingriisi).
Haddii Ardaygaagu Barto Luuqada Ingiriiska (ELL):
Boston Public Schools (BPS) waxay u abuurtay bogga xogta taageerada ardayda barta Ingiriiska halkaan laga helaayo.
Mashruuca Macallinka cusub (TNTP) wuxuu bixiyaa macluumaadka dukumiinti PDF ah oo lagu taageerayo bartayaasha luuqadda Ingiriisiga , oo ay ku jiraan hagida, aaladaha teknolojiyada, iyo ilaha loogu talagalay sii-wadashada akhriska iyo horumarinta luuqadda ee ardayda ku hadasha luqadaha badan oo ay ka mid yihiin waraaqaha daabacaadda, haddii qaangaar loo baahan yahay iyo in kale shaqada oo dhan, iyo sida loogu helo marinnadaas.
Khan Academy: oo lagu baxsho 40 luuqadood, Khan Academy wuxuu sii waday inuu taageero waalidiinta iyo macalimiinta kana taageero sidii ay u adeegsan lahaayeen ilahooda inta lagu jiro waxbarashada oonleenka ah. Khan Academy waa ilo bilaash ay ku helayaan ardayda, macalimiinta, iyo waalidiintu oo baxsha casharada maktabada oo lagu barto fasalada xanaanada ilaa maadooyinka biloowga kuleejka ee xisaabta, naxwaha luuqada, sayniska, iyo taariikhda, oo ay la socdaan koorsooyinka AP, u diyaar garoowga SAT, iyo kuwo kale.
ColorinColorado: Webseetkaan labada luuqadood ku baxa waxaa ku jira ilo iskudhaf ah oo loogu talagalay waalidiinta iyo macalimiinta ardayda Ingiriisiga barta.
Duolingo: si ay ardaydu u bartaan wada sheekaysiga luuqada Ingiriiska.
Immigrant Connections: Lagasoo bilaabo kanaalada aalada YouTube ilaa tusmooyinka tixraaca ah, barta waxaa ku jira liiska ilo balaaran oo isdhufan si looga caawiyo ardayda barta Ingiriiska iyo waalidiinta soo galootiga ah inay taageeraan waxbarashada oonleenka guriga ee ku meel gaarka ah ee ilmahooda.
Listenwise: Wuxuu taageeraa fahanka dhagaysiga luuqada asagoo bixinaaya sheekooyin iyo fanka luuqada Ingiriiska oo aan bug ahayn, cilmiga bulshada, iyo sayniska. Iska qoristiisu waa bilaash waxaana ku jira tageerooyinka ardayda Ingiriiska barta.
Newsela: Waa meelo laga helo ilo bilaash ah oo oonleen ah oo lagu barto fanka luuqada Ingiriiska, sayniska bulshada, sayniska iyo taageerooyinka waxbarashada dareenka bulshaynimada iyo ardayda ingiriisiga barata.
DESE, oo ah wakaalada gobalka ee kormeerta waxbarashada gobalka Massachusetts, waxaa ku jira liiska balaaran ee ilaha oo loo habeeyay maado-maado (Ingiriiska/Fanka Luuqada, Xisaabta, STEM, Farshaxanka, iwm.), iyo sidoo kale ilo loogu talagalay ardayda ELL iyo taageerada waxbarashada gaarka ah.
Ka fiiri Ilaha Waxbarashada ee Ardayda iyo Qoysaska ee DESE Halkaan.
DESE iyo xarunta taleefishinka bulshada ee WGBH ayaa iska kaashanaaya inay ilaha waxbarashada u keenaan ardayda iyo qoysaska ayadoo la adeegsanaayo barnaamijyada taleefishinka iyo ilaha xogta oonleenka ah ayadoo la adeegsanaayo PBS LearningMedia. Ilaha waxaa lagu helayaa fasal-fasal iyo sidoo kale maadadiiba waxayna waafaqsan yihiin heerarka waxbarashada ee heer gobal iyo kuwa heer qaran. Ilahaan waxaan ku jira muuqaalo, casharo fahansiin ah, iyo nashaadaad kale:
Ilaha waxbarashada Pre-K
Ilaha waxbarashada Fasalada K ilaa 2
Ilaha waxbarashada ee Fasalada 3 ilaa 5
Ilaha waxbarashada ee Fasalada 6 ilaa 8
Ilaha waxbarashada ee Fasalada 9 ilaa 12
Barnaamijka waxbarashada oonleenka ah oo waafaqsan ilaha barta PBS LearningMedia ayaa ka bixi doona taleefishinka WORLD CHANNEL Isniinta ilaa Jamcada laga bilaabo 12:00 PM ilaa 5:00 PM maalin kasta oo kuwa asbuuca ah.
WGBH WORLD waxaa laga heli karaa kanaalada soo socda ee taleefishinada: Comcast 956, FiOS 473, RCN 94, Cox 807, iyo Charter 181.
Dhagsii halkaan si aad u aragto jadwalka maalin kasta ee barnaamijyada waxbarashada oonleenka ah ee ka baxaaya taleefishinka.
Laynka Caawimaada Qoyska ood Taleefanka ku helayso
BPS way sii xirnaanaysaa inta lagu jiro sanad dugsiyeedka 2019-20 sabab la xariirta aafada korona fayras. Waxaad heli kartaa ilaha adeegyada iyo xogihii ugu danbeeyay oo degmada kasoo baxay adoo wacaaya Laynka caawimaada ee BPS oo ah 617-635-8873, Isniinta ilaa Jamcada, 9 AM ilaa 5 PM.
Webssetka Waxbarashada Guriga oo la iskugu aadiyay Dugsi ahaan
Guji halkaan si aad u aragto liiska dhammaan dugsiyada BPS ee leh baraha waxbarashada oonleenka ah oo u gaar ah, shaqadaas kaliyana u xilsaraan oo ka badan waxa ay dugsiyada kale ee BPS bixiso
Ilaha Waxbarshada Guriga Faslka lagu jaan gooyay
Fasalada K0 ilaa 2
Fasalada 3 ilaaa 5
Fasalada 6 ilaaa 8
Fasalada 9 ilaaa 12
BPS waxay barnaamijyo ku qabataa Boston Neighborhood Network Community TV. Muuqaalada oo toos u socda ayaad ka helaysaa webseetka iyo iyo markaad dalbato inaad hadhoow daawato.
Maamulaha guud Brenda Cassellius ayaa qabata "Habayn Wanaagsan Ardayeey" habaynkii xiliga hurdada ayadoo kor loo akhrinaayo markay tahay 7:30 fiidnimo ayna ka qaybgalayaan marti qaas ah.
Fasalada Oonleenka ah iyo Aaladaha
BPS waxay inta badan adeegsataa laba aaladood si ay u kaydiso aaladaha iyo webseetyada ardayda: Clever iyo Google Classroom.
Ardaydu waxay gali karaan labada aaladoodba ayagoo adeegsanaaya bartooda BPS Gmail (______@bostonk12.org) iyo baasweerka BPS
Shaki ma ka qabta iimeelka ama baasweerka ardaygaaga? ka fiiri xaashidaan tilmaanta ama la xariir Xafiiska Caawimaada ee BPSTechnology ood ka wacayso 617-635-9200.
Fadlan ogoow: dhammaan xarumaha ku yaala BPS ayaa hadda xiran. BPL waxay bixisaa dhawr ilaha oonleenka ah oo la siiyo dhammaan da'aha. Waxaad kaliya u baahan tahay Kaarka Maktabada ee BPL si aad u hesho adeegyadaan; Kaarka Maktabada BPL si bilaash ah ayay ku helayaan dhammaan dadka dagan Massachusetts.
Qaado kaarka Oonleenka ah si bilaash ah ood oonleen ahaan uga helayso halkaan.
Baro luuqad cusub
Baro koorso oonleen ah
Baro waxyaabaha aad jeceshahay
Ku baashaal samayn farshaxano iyo muusig, iyo waxyaabo kale
Boston Beyond ayaa diyaarisay ilaha kobcinta iyo waxbarashada ee guriga oo ay baxshaan ururadeeda in ka badan 300 oo barnaamij. Ilaha waxaa loo sameeyay barnaamijyada kale si ay u adegesadaan iyo ardayda iyo qoysasku inay toos u galaan.
Halkaan guji si aad u aragto liiska Boston Beyond ee ilaha waxbarashada oonleenka guriga iyo kuwa kobcinta, oo si joogto ah wax looga badalo.
almanac.com/kids: ilaha waxbarashada eeee fsalada pre-K iyo fasalka dugsiga hoose
amazingeducationalresources.com: waa liis si joogto ah u cusbooneysiinaya oo ah ilaha waxbarasho bilaash ah laga heli karo internetka.
code.org/athome: websaydhkooda ayaa bixiya koodh iyo kombuyuutar saynis ah ilo oo guriga looga heli karo ama aan kombiyuutar haysan.
coolmath4kids.com: ilaha xasaabadka ee da'aha 3 ilaa 12
coolmath.com: ilaha xasaabadka ee da'aha 13+
earlyliteracylearning.org: ilaha luuqada iyo akhriska ee da'aha 0 ilaa 5
exploratorium.edu: ialah waxbarashada ee fasalada dugsiga hoose
first8studios.org: ilaha xisaabta iyo sayniska ee fasalada dugsiga hoose
funbrain.com: Ilaha waxbarashada iyo gaymamka ee fasalada Pre-K ilaa 8
highlightsforkids.com: ilaha akhriska ee fasalada Pre-K iyo dugsiga hoose
kids.nationalgeographic.com: Ilaha sayniska iyo cilmiga bulshada ee fasalada Pre-K iyo dugsiga hoose
learninggamesforkids.com: gaymamka waxbarashada ee dhammaan fasalada
pbskids.org: ialah waxbarashada ee carruurta
playworks.org/get-involved/play-at-home: Ilaha cioyaarta guriga iyo nasiinada ee ciyaalka dhammaan da'aha.
scholastic.com/learnathome: ilaha waxbarashada ee dhammaan fasalada
sesamestreet.org: ialah waxbarashada ee fasalada dugsiga hoose
teach.starfall.com/lv: xaashida shaqada fasalka ee la daabici karo iyo ilaha fasalada Pre-K ilaa 3
TIMEforKids.com: casharada taaariikhda iyo cilmiga bulshada ee fasalada K ilaa 6
youngmathematicians.edc.org: gaymamka xisaabta ee qoyska ee carruurta da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 6